madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo qudbad dhinacyo badan taabaneeysay ka jeediyay shirkii midowga africa ee kasocda xarunta itobiya | Risala FM-The Voice of Horn Africa
madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo qudbad...
madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo qudbad dhinacyo badan taabaneeysay ka jeediyay shirkii midowga africa ee kasocda xarunta itobiya
madaxweynaha dalka mudane uhuru kenyatta oo qudbad ka jeedinaayay shirka 26 ee midowga africa ee caasimada itoobiya ayaa ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo waajibaadka hawlgalka Ciidamada Amisom ee somalia kusugan.
madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sidookale ku baaqay in isbadal lagu sameeyo xeerarka ay ku hawlgaalaan ciidanka nabad ilaalinta somalia ujooga ee Amisom si xarakada al shabaab ay uga saaraan guud ahaanba somalia.
madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sidookale sheegay inay muhiim tahay in agab dhameeystiran la siiyo ciidanka amisom ee nabad ilaalinta ujooga somalia si ay awood dheeraad ah ugu yeeshaan hawlgalada ay kawadaan somalia sida dhanka cirka dhulka iyo badda.
mr uhuru ayaa sidookale kadhawaajiyay inay nasiib daro tahay in ciidamada somalia loo daad gureeeyay ay wajahaan falal argagixiso iyo dambiyo kala duwan.
madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in ciidamada amisom ay guulo ka gaareen gudaha somalia haatana la joogo xiligii isbadal lagu sameeynalahaa si looga adkaado xarakada al shabaab si dawlada somalia ay awood ugu yeelato dhamaanba degaanada somalia inay xukunto.
sidookale wuxuu sheegay in ujeedka hawlgalka amisom uu ahaa in la taageero dawlada somalia si ay gacanta ugu dhigto degaanada somalia inta laga gaaraayo doorashada 2016 lakiin haatan ay muuqato in lagu guuldareeystay arintaasi loona baahanyahay in isbadal lagu sameeyo waajibaadka hawlgalka amisom.
mdaxweyne uhuru ayaa sheegay in xoogaga alshabaab ay badaleen taactiga dagaalka loogana baahanyahay wadamada jaarka la ah somalia ee ciidamadooda ay jogaan gudaha somalia inay qaadaan talaabooyin horey loogu soconaayo.
sidookale mr uhuru kenyatta ayaa sheegay inkastoo argagixisadu ay tahay dhibaato caalami ah hatana somalia inay noqotay wadan argagixiso.
madaxweyne uhuru kenyatta oo qudbadiisu dhinacyo badan ay taabaneeysay ayaa ugu dambeeyntii ugu baaqay hogaamiyaasha koonfurta sudan inay si daacad ah u dhaqan galiyaan heshiiskii nabada si loosoo afjaro coolaada daba dheeraatay ee kajirta dalkaasi.